Ikotofetsy sy ImahakÃ sa Mapar sy Tim? | Hevitra MPANOHARIANA |
Ikotofetsy sy ImahakÃ sa Mapar sy Tim?
2015-05-27 @ 23:08 in Politika
Efa tsy te-hiresaka adilahy politika intsony aho, fa tsy hanary ny resaka politikam-pandaminana sy fandalinana fotokevitra politika, saingy tsy avelan'ny toe-draharaha eto amin'ny firenena hipetrapetraka sy ho zary mpitazana fotsiny, na dia maharikoriko aza ilay izy.
Iray volana teo ho eo izay dia nisy ny zaikaben'ny fampihavanam-pirenena. Anisan'ny nivoaka tao, na tsy voatery arahina aza, ny fandravana ny andrim-panjakana rehetra ankoatra ny Filohan'ny Repoblika. Lasibatra manokana amin'izany fangatham-pandravana izany ny antenimieram-pirenena izay nampikoropaka ireo mpikambana tao anatiny sy nampanaovan-dry zareo valan-dresaka hitsipahana izany fikasana izany. Efa namaly ankolaka izany ihany ny tao amin'ny presidansa saingy tsy mbola maty lolo ireo depiote ireo. Manantomotra ny fisokafan'ny fotoam-pivoriana ara-potoanan'ny antenimiera indrindra io fotoana io ka alaim-panahy ihany ry depiote hivondrona.
Mifanindran-dalana amin'izany dia naka fanapahan-kevitra, hanaisotra ny hitsivolana nandidy ny fiambenana an-dRavalomanana amin'ny toerana manokana noho ny "fidirana an-tsokosoko" teto an-tanindrazana, ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Nahatezitra tanteraka ireo nanongam-panjakana tamin'ny 2009 izany fanapahan-kevitra izany, satria ny fototra ijoroany voalohany tsy azon-dry zareo anaovana adivarotra dia ny famafana tanteraka izany anarana Ravalomanana izany amin'ny sehatra politika. Bala faharoa hiantefa any amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa io fanapahan-kevitra io satria ilay tolona nimatesaka tamin'ny fiandohan'ny taona 2009 mihitsy no montsana tanteraka. Nanomboka teo dia napoapoaka fa fitondrana hvm-tim izao fitondrana mijoro izao rehefa hiara-miasa amin-dRajaonarimampianina Atoa Ravalomanana.
Tamin'ity herinandro mamarana ny volana mey ity anefa dia tontosa tampoka ny fivorivorian'ny depiote hanongana ny filoham-pirenena. Ny gazety vahiny mitabataba ny "destitution" moa ry mpanao lalàna sy ny eto an-toerana miezaka ny miteny ny "déchéance". Fa na "destitution" io na "déchéance" toa voahongana ihany no dikan'izany amin'ny teny malagasy fa tsy haiko loatra indray raha amin'ny teny frantsay. Ny niantefan'ny eritreritra voalohany raha vao tontosa ilay izy dia hoe ny Mapar no nitarika io fombafombam-panonganana io noho ny nanonganana ny Birao Maharitra voalohany nibahanan-dry zareo ny sehatra, ny nialàn'ny filoha tanteraka amin'ny fiarahana tamin'ny Mapar, ny tsy nahazoan'i Andry Rajoelina na olona hafa ao amin'ny Mapar ny toeran'ny praiminisitra ary ny nanomezana fahalalahana miriaria ho an'ny filoha teo aloha Ravalomanana. Nodradradradraina amin'izay ny taimbava hoe tsy mahay afa-tsy ny manongana ve no ataon-dry Mapar sy ny tariny. Tonga amin'izay ny fanaterana ny fangatahana fanonganana teny amin'ny Lapan'ny Fitsarana Avo momba ny Lalapanorenana vao kepoka ny Zanak'i Dada fa hay anisan'ny nikononkonona mangina tamin'ny fanonganana ny filoha ihany koa ny Tim. Fa inona no nitranga?
Azo heverina fa mora takarina ihany ny fahagagana mahazo ny Olon-tsotra Zanak'i Dada satria raha ny fotokevitra amin'izao dia tsy tia ilay fanonganam-panjakana amin'ny endriny rehetra mihitsy izy ireo. Maharesy lahatra kokoa ny Zanak'i Dada ny hoe mitady fitoniana sy fahamarinan-toerana ara-politika ny firenena fa efa mijaly loatra ny vahoaka. Mandeha ho azy ny fanondroana ireo depiote Tim hita sary nanatitra dosie teny Ambohidahy ho mpamadika, nefa tsy nitsahatra ny hagagana rehefa re fa toa ny depiote tim rehetra mihitsy no nanaiky ilay fanonganana. Tsy manana eritreritra mihitsy ny Zanak'i Dada fa mety hiara-dia izany tim sy mapar izany, aleon-dry zareo aza ilay fiaraha-miasa hvm sy tim no lefitra kokoa fa tsy ilay vondron'olona nanongana ny olona notohananao indray no iarahanao. Hatreto dia vondron'olona tsy hanaiky ny fahalalahan-dRavalomanana izany Mapar izany ary tsy mbola nisy fitenenana avy amin-dry zareo fa avelany ho afa-maina fotsiny amin'izao ny filoha efa nahongany. Amin'izao fotoana aza moa dia esoeso no azon'ny Zanak'i Dada avy amin'ireo mpandrangitra avy amin'ny mpanohana an'i Andry Rajoelina. Mbola maro noho izany no mihevitra fa diso lalana sy diso paika Ravalomanana raha sioka tokana avy aminy no nanaovan'ny depiote tim ny latsabatom-panonganana.
Dia miezaka ny tena hamantatra hoe inona no ahasahian'ny tim hiaraka hanongana amin'ny mapar. Tsy mbola ananana ny antony fa azo atao kosa ny manombatombana. Voalohany, andro vitsy dia vitsy taorian'ny Zaikabe tim no nanaovana ny latsabato ary nisy ny nanoratra fa naroso io zaikabe tim io, ho fanomanana ny fifidianana kaominaly ho avy. Faharoa, mbola nanatontosa ilay teniny tamin'ny fotoana nahatongavany ihany Ravalomanana hoe tsy mahandry ny 2018 izy "hananganana firenena vanona". Fahatelo, tsy hahasahy handrava velively ny Antenimieram-pirenena Rajaonarimampianina, rehefa fantany fa tsy mbola hahazo ny maro an'isa izy, fa ireto vondron'ny nanongana ireto no samy manantena handrombaka ny fandresena raha hisy indray ny fifidianana depiote. Ny mahavariana dia tsy misy fanazavana avy amin'ny depiote tim hatreto ilazany ny antony nanaovany ny latsabato fanekena fanonganana, ka lasa mampihevitra fa mpanara-driandrano fotsiny ry zareo fa tsy tompon-kevitra. Hafa indray ny fandehan-javatra raha hoe hanangana antenimieram-panorenana tendrena fa tsy hofidiana Rajaonarimampianina, saingy amiko manokana dia tsy hahavaha olana velively izany antenimiaram-paorenana hotendrena izany, tsy maintsy ho lalampanorenana sadasada hatrany no hivoaka avy eo noho ny marimaritra iraisana. Raha avy amin'ny fifidianana kosa indray dia azo vinaniana ihany ny fotokevitra tian'ilay voafidy nandritra ny fandresendahatra nataony.
Eto dia miankina tanteraka amin'ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana avo momba ny lalampanorenana ny tohin'ny raharaha. Ny tena manokana dia mihevitra fa azo tsipahina tsy amin'ahiahy ity fangatahana fanesorana ny filoha ity satria sady tsy lasa adala no mbola afa-mandeha sy afa-miresaka mitombina tsara ny filoha. Tsy maintsy manova fihetsika sy manova ny ekipa ny filoha raha tafavoaka amin'izao sedra izao, ho hentitra ary tsy hanao kinanga amin'ny fitantanana ireo orinasa tantanin'ny fanjakana na ananan'ny fanjakana malagasy petrabola ampahany betsaka. Mety ny fanapahan-keviny tsy handrava ny antenimieram-pirenena mba tsy hanisy menaka ny afo narehitry ny sasany, ary hitony tokoa ny toe-draharaha rehefa tsy mamaly fihantsiana amin'ny fihantsiana. Hitonitony ratsy araka ny fiteny moa izany fa tsy hoe handry fehizay tsy akory. Hatreto aloha dia miditra anaty savorovoro indray ny fiainam-pirenena ary tsy afa-bela ao anatin'izay ilay toekarena efa marefo dia marefo.
Jentilisa 28 mey 2015, amin'ny 01:05 a.m. ora eto Antananarivo.